Fotoana famakiana: 3 minitra Tsy misy tsy fahampiana ny tafahoatra manintona any Eoropa. Adrenaline mitady sy tia ny fanatanjahan-tena tafahoatra afaka mahatsapa Eoropa isan-karazany amin'ny toerana isan-karazany ny asa. Raha toa ianao nanontany tena ny fomba ahatongavana any lamasinina, izahay no nanarona, koa! Ireto ny ambony…
Fotoana famakiana: 3 minitra Tia ny zavakanto maoderina dia manana toerana maro mba hitsidika any Eoropa. Noho izany harena ny safidy, angamba ampahany sarotra indrindra no mifidy ny toerana halehany. Na izany aza, raha izay tadiavinao mba hitsidika ny voalohany Eoropa toerana mafampana ho an'ny fitrandrahana kanto, Nahoana raha drafitra ny diany manodidina azy?…